१३.३७ अंक घटेको बजारमा २ अर्बभन्दा बढीको शेयर कारोबार, आईसीएफसीको शेयरमूल्यमा सर्वाधिक वृद्धि
असोज २५, काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १३ दशमलव ३७ अंकले घटेर १ हजार ५७६ दशमलव २७ विन्दुमा झरेको छ ।
बिहीवार ११ दशमलव ३४ अंक घटेर १ हजार ५८९ दशमलव ६३ विन्दुमा बन्द भएको बजार आइतवार १ हजार ५९४ दशमलव शून्य १ विन्दुदेखि खुला भएको थियो ।
यो दिन कारोबार खुलेको दुई मिनेटमै बजार १ हजार ५९४ दशमलव ३६ विन्दुमा पुगेको थियो । दोहोरो अंकले घटेको आइतवारको बजारमा रू. २ अर्ब ३९ करोड ५४ लाख ३२ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
यस दिन १९३ ओटा कम्पनीको ३७ हजार ५१५ पटकको व्यापारमा उक्त रकम बराबरको ९२ लाख ८१ ह्जार ४७८ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । आइतवार कुल कारोबारमा सर्वाधिक हिस्सा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको रू. १० करोड ६ लाख ८५ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १५ ले बढेर रू. १ हजार ३८६ कायम भएको छ । उक्त कम्पनीको आइतवार ७२ हजार ४१३ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
यो दिन सर्वाधिक रकमको कारोबार हुने १० ओटा कम्पनीहरुमध्ये धेरै जसो जलविद्युत् कम्पनी रहेका छन् । अपि पावर कम्पनी आइतवार सर्वाधिक रकमको कारोबार गर्ने दोस्रो नम्बरमा परेको छ ।
उक्त कम्पनीको आइतवार रू. १० करोड २ लाख ५३ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । आइतवार वित्त समुहको बाहेक अन्य समुहको परिसूचक घटेको छ । यो दिन वित्त समुहको परिसूचक २ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले बढेको हो । यस दिन होटल समुहको परिसूचक सर्वाधिक २ दशमलव १४ प्रतिशतले घटेको छ ।
त्यस्तै व्यापारिक समुहको १ दशमलव ८४ प्रतिशत, बैंकिङको शून्य दशमलव ८३ प्रतिशत, विकास बैंकको १ दशमलव शून्य १ प्रतिशत, जलविद्युतको १ दशमलव ९८ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समुहको १ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समुहको १ दशमलव ५५ प्रतिशत, अन्यको शून्य दशमलव ९१ प्रतिशत, लघवित्तको शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत, जीवन बीमाको शून्य दशमलव ११ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ ।
आइतवार आईसीएफसी फाइनान्सको शेयरमूल्य सर्वाधिक बढेको छ । यो दिन उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव ८२ प्रतिशतले बढेको हो । प्रतिकित्ता रू. २२ ले मूल्य वृद्धि भई आइतवार उक्त कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. २४६ कायम भएको छ ।
यो दिन रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनीको शेयरमूल्य पनि ८ दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेको छ । रिडीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १६ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. २०६ पुगेको छ ।